» सभामुखले गुरिल्ला स्टाइल देखाए : एमाले
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेटमा के ल्याइयो भन्ने कुरा ठूलो नभएको बताउँदै उनले संसद्मा विधि के अपनाइयो भन्ने कुरा मुख्य भएको बताए । यसरी संसदमा प्रस्तुत हुनु घोर तानाशाही प्रवृत्ति भएको टिप्पणी उनले गरे । अहिले बजेटमा थपिएका केही कुराले जनतामा खासै प्रभाव नपर्ने भट्टराईले बताए ।
एमाले स्थायी कमिटी सदस्य एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले संसदमा प्रस्तुत गरिएको संशोधित बजेट निधारमा लगाइएको टीकाजस्तो भएको टिप्पणी गरे । नयाँ सरकार आएपछि केही भनिदिनुपर्छ भनेर भनिएको विवरण मात्रै आएको उनले बताए । तर, सबै दलसँग सल्लाह गरेर बजेट संशोधन गरेको भए उचित हुने उनले बताए ।
‘त्यो कुर्सीमा बसिरहँदाखेरि सबै दलप्रति समान व्यवहार गर्नुपर्छ । उहाँले त्यो काम गर्नुभएन । हाम्रो विरोध त्यसप्रति हो । यतिसम्म असहिष्णुता देखाइसक्नु भएको छ कि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा त्यसका सदस्यहरुलाई समेत कार्यसूची र एजेन्डा दिनुहुन्न, यसरी उहाँले संसद कसरी चलाउनुहुन्छ ? हामीले अवरोध गर्न खोज्या हो र ? उहाँको तरिका गलत भयो त्यसको विरोध गरेको हो, प्रतिवाद गरेको हो,’ बाँस्कोटाले भने । आजको राजधानी दैनिकमा यो समाचार प्रकाशित छ ।
सभामुखलाई एमाले अध्यक्ष केपी ओली र सांसदहरूले धम्की दिएकोमा सत्तारुढ दलको आपत्ति
कानून निर्माणमा जनताका भावना समेटिएमात्रै संसद सफल : सभामुख सापकोटा
संसद अधिवेशनका लागि हामी तयारी अवस्थामा छौं : सभामुख सापकोटा